...	Fandraisana > Tontolo iainana > Famindrana fitantanana
1. Inona ny atao hoe famindram-pitantanana ?2. Inona avy ireo harena voajanahary azo anaovana famindram-pitantanana ?3. Inona no atao hoe Vondron’Olona Ifotony (VOI) ?4. Tombotsoa azo avy amin’ny famindram-pitantanana ? 5. Inona avy ireo dingana arahina raha hanao famindram-pitantanana ?6. Ireo antontan-taratasy tsy maintsy hananana mba ho enti-mitantana7. Inona ireo Paikady mampahomby ny famindram-pitantanana ?8. Ireo mpiara-miombon’antoka azo atoninaLazao ny hevitrao
Famindrana fitantanana1. Inona ny atao hoe famindram-pitantanana ?
Fanomezan'ny fanjakana alàlana ny Vondron'Olona Ifotony (VOI) hanajary maharitra sy hiaro ireo harena voajanahary izay azo trandrahana ka afaka haverina amin'ny laoniny. Ireo Vondron'Olona Ifotony ireo izany no hitantana ireo harena voajanahary ireo sy hampiasa azy ho loharanom-bola ho an'ny tombotsoany sy an'ny Kaominina ary ho amin'ny fampandrosoana maharitra ireo faritra sy ny firenena. 2. Inona avy ireo harena voajanahary azo anaovana famindram-pitantanana ?
Ireo harena voajanahary rehetra izay afaka averina amin'ny laoniny rehefa avy trandrahana, toa ny ala, farihy, honko, loharano, vatohara anaty ranomasina, vondro na zozoro, kijàna. 3. Inona no atao hoe Vondron’Olona Ifotony (VOI)?
Ny VOI dia fikambanan'olona manana tombotsoa iombonana ary manana fomba fiainana mitovy ka mikambana an-tsitrapo mba hitantana ny harena voajanahary eo an-toerana, harena izay azo avaozina. Ny fikambanana dia mety ho mponina ao amin'ny Tanàna iray na Fokontany iray na Fokontany maromaro mitambatra.
Tsy maintsy ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy any amin'ny Kaominina ny fijoroan'ny VOI.
Ny rafitra misy ao amin'ny VOI dia ny Fivoriambe sy ny Drafi-pitantànana.
Ny Fivoriambe no rantsana mpandray fanapahan-kevitra anatiny ary teny miera no andraisan'ny Fivoriambe fanapahan-kevitra. Ny Drafi-pitantanana kosa no rantsana mpanantanterakan'ny VOI. Ao anatiny dia ahitàna Filoha iray, Filoha-Lefitra iray, Mpitam-bola iray ary Sekretera iray izay voafidin'ny Fivoriambe.
4. Tombotsoa azo avy amin’ny famindram-pitantanana ? Tsy ritra ny harena voajanahary iankinan'ny fiainan'ny olona.
Maharitra ny fidirambola ao amin'ny VOI noho ny vola azony avy amin'ireo harena voajanahary azo avaozina.
Manana alàlana hitrandraka amin'ny alàlan'ny fampiasana teknika tsy mandritra ireo harena ny VOI ary hitantana ny vola azo amin'izany. Mora kokoa ny fahazoana alàlana hitrandraka ireo harena voajanahary voakasiky ny famindram-pitantana.
Mahazo fampianarana mikasika ny fitrandrahana maharitra ny ala, ny fitatanam-bola, ny fampandrosoana fikambanana, ny teknika fiompiana, ets.
5. Inona avy ireo dingana arahina raha hanao famindram-pitantanana ?
Fanentanana sy fampahalalàna ny atao hoe" famindram-pitantanana eo anivon'ny fokontany".
Fangatahana ny hamindràna fitantanana ilay harena voajanahary ataon'ireo olona izay ho lasa mpikambana ao amin'ny VOI
Faneken'ny mpitantana ny harena voajanahary (sampandraraha teknika, kaominina, ets.).
Fanoratana ireo antontan-taratasy tsy maintsy hananana mba ho enti-mitantana. Misy fifanarahana atao amin'ny olona mpanelanelana amin'ny fanoratana ireo antontan-taratasy ireo. Fifampiraharahana sy fanaovan-tsonia ny fifanaraham-pamindram-pitantanana.
Fanaovan-tsonia ny fifanarahana famindram-pitantanana.
Fahazoana ny zò hitantana ireo harena.
Source : Tany Meva
Source : ERI
6. Ireo antontan-taratasy tsy maintsy hananana mba ho enti-mitantana
Ny fifanarahana famindram-pitantanana ny harena voajanahary.
Ny drafi-panajariana sy fitantanana ny harena voajanahary.
Ny bokin'andrikitra mametraka ireo zò aman'andraikitr'ireo toko telo mifanaiky (ny VOI, ny Kaominina ary ny Fanjakàna).
Ny dina izay mifehy ny fifandraisana anaty amin'ny samy mpikambana ao amin'ny VOI, amin'ny fanatanterahana ny fifanekena. Mihatra ihany koa amin'ny olona ivelan'ny fikambanana io dina io, raha misy ny fandikan-dalàna eo amin'ny fampiasàna ny harena voajanahary.
Ireo antontan-taratasy mikasika ny fari-piveloman'ny VOI, izany hoe: ny drafitry ny harena voajanahary, ny anton'ny famindram-pitantanana, ny drafitry ny faritra manodidina tafiditra amin'ny fizakàna fananan-tany iarahana, sy ny taratasy fanamarinana natao nandritra ny famaritana, ny drafitra fizaran-tany, atao hoe drafitra SFR.
7. Inona ireo Paikady mampahomby ny famindram-pitantanana ?
Hatsaraina kokoa ny fomba hamadihana ho vola ireo harena voajanahary. Ampidirina ao anaty rafitra lehibe kokoa ny famindram-pitantanana toy ny drafi-panajariana ny Kaominina, ny Faritra, ets...
Atao mafy ny fiofanana ary ny fanarahana ny VOI izay tokony ho mandritra ny 5 taona farafahakeliny.
Hamafisina ny fifandraisan'ny samy VOI ary indrindra ny VOI amin'ny tontolo ivelany.
Entanina ny tompon'andraikitra ao amin'ny Ministeran'ny Ala mba hirotsahany misimisy kokoa amin'ny fanohanana ny VOI.
8. Ireo mpiara-miombon’antoka azo antonina
Fanohanana ara-bola : Fondation Tany Meva
Ny GEF / SGP
Fanohanana ara-teknika :
Ny SAGE Ny SAHA Fandraisana